Ny kitendry haptic tsy misy lakile izay nopihan'i Apple | Avy amin'ny mac aho
Hitanay ny kitendry haptic Apple vaovao
Voapetraka indray ny orinasan'i Tim Cook lohalaharana amin'ny fanavaozana ny teknolojia aorian'ny asa fikarohana sy fampandrosoana lehibe. Eo amin'ny laharam-pahamehana hatrany amin'ny fanavaozana, Apple dia nahazo ny 7 aprily ny fankatoavan'ny Biraon'ny Patent ny tetikasa natolotra: ny tantara fitendry tsy misy fanalahidy ho an'ny solosaina. Fantatsika izao ny antsipirian'ny teknolojia mandrafitra an'ity klavijery ity ho an'ny solosainao finday.
Ny patanty dia mitondra ny lohateny hoe "Structure sensitive to force, and configurable for electronic electronics" y hampiditra vanim-potoana vaovao revolisionera amin'ny fitaovana finday laptop isaky ny mandeha matevina kokoa sy maivana kokoa.
Kitendry tsy misy lakilen'ny teknolojia haptic
Mpampiasa sasantsasany no naneho fihetsika tsy mataho-tody fanavaozana ny trackpad ny kahie Apple misy Force Touch, na dia ny fanatsarana tsy azo iadian-kevitra aza nitondra tombony lehibe io miaraka amin'ny fampiasana azy amin'ny fampiononana, fahombiazana ary fahombiazana, manome ny antony indray amin'ny tolo-kevitr'ilay orinasa.
Teknolojia mitovy amin'ny Force Touch no iray izay nampiasaina tamin'ny fampivoarana ity klavier ity izay misy a cape misy sensor izany no hanoratra ny hetsika ary faneren'ny rantsan-tànana amboniny. Ao amin'ny tranokalan'ny United States Patent and Trademark Office dia azonao atao avereno jerena ity tetikasa ity.
Fanesorana ny tontonana klasika natokana ho an'ny klavier, hateviny sy lanja ny solosaina dia hahena ho amin'ny fanehoan-kevitra farafaharatsiny. Ity patanty Apple vaovao ity dia hisolo ny lakile miaraka amina simika mitovy ao aminy Endrika LED, angamba ho toy ny sary na vinavina eo amin'ilay taratasy.
La fanehoana sary ny tarehin-tsoratra manana tombony lehibe izy io ankoatry ny fihenan'ny habeny Haiko koa hampihena ny fanjifana angovo ary ny mety ho nametraka preferences ary ny firafitra fitendry mifototra amin'ny fiteny dia handeha lavitra amin'ny fampidirana fitaovana Any amin'ny firenena rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Hitanay ny kitendry haptic Apple vaovao
Ahoana ny fomba hanatevenana horonan-tsary ao amin'ny OS X ary ampio amin'ny iTunes
Mampitaha MacBook, WhatsApp amin'ny Mac, mpikirakira ARM ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho